Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Muqdisho
Taliye Ku-xiggeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Zakia Xuseen Axmed ayaa faah faahin ka bixisay qarax khasaaro geystay oo xalay fiidkii ka dhacay afaafka hore ee xarunta Dugsiga Tababarka ee Janeraal Kaahiye ee Magalada Muqdisho.
Sarreeye guuto Zakia Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ay jiraan dhaawacyo 8 ruux oo 4 kamid ah ay qabaan dhaawacyo fudud iyo bubur ganacsiyo yaryar oo meesha ku yaallay waxayna intaas raacisay in aysan jirin ilaa iyo hadda wax dhimasho ah.
Janaraal Zakia ayaa dhammaan shacabka iyo bahda warbaahinta u sheegtay in ay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ay laamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo.
Taliye Ku-xiggeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa tiri “Annagoo ka jawaabeyna codsiyada ka yimid shacabka Gobolka Banaadir waxaa Ciidanka Booliiska ay maanta hirgaliyeen khad telefoon oo ay si fudud shacabka noogala soo xiriir karaan, idinka oo si toos ah nooga soo wici kara 991 oo 24ka saac diyaar ah.
Qaraxaas xalay ka dhacay Magalada muqdisho ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay ay inta badan wada xiran yihiin wadooyinka waaweyn ee Magalada Muqdisho,isla markaana ammaanka aad loo ilaalinayo.
Tartanka orodka Gaaban oo lagu qabtay Muqdisho
Somalia hold mini marathon in Mogadishu